"Education for Myanmar Youths": မျိုးဆက်သစ်တို့တွက် တိုးတက်ရာလမ်းစများ ရှာဖွေစို့
Posted by S.S at 6:39 PM
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အချက်တချက်က.. အသက်မွေးပညာ ( vocational training) ရဲ့အရေးပါချက် လို့ ယူဆပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ..၁၉၈၀ လောက်က..စတင်သယ်ဆောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့တဲ့.. ပညာရေးအရာရှိ တယောက်နဲ့ သိဘူးပါတယ်။ သူပြုစုခဲ့တဲ့ စာတမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့..ပညာရေးဆိုတာ..ဘွဲ့လို့ ညီမျှခြင်းထိုးနေရတဲ့..ခေတ်အခြေအနေမှာ.. အတန်းပညာရော..အတတ်ပညာပါ..အတူမတွဲနိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်တချက်- ဆရာ-ဆရာမများရဲ့ အရည်အသွေး နဲ့ပတ်သတ်လို့- teahing for teaching ဆိုတာမျိုးတွေ နည်းပါးသွားပြီလားလို့ သံသယ ရှိလာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာပေါ့။
အချုပ်မတော့- ဆောင်းပါးကောင်းတပုဒ် ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ မကေပြောတာ လက်ခံတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တက္ကသိုလ် အဆင့်ကျောင်းသားတွေတော့ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ စာတွေကို ဘယ်လို ပေါင်းစပ်ပြီး လေ့လာရတယ်ဆိုတာ မြနမာပြည်မှာ တက္ကသိုလ် မရောက်ဖူးလို့ ကျွန်မ နှိုင်းယှဉ်လို့ မတတ်ပေမယ့် အခြေခံပညာအဆင့်မှာ ကွာတာကိုတော့ ကျွန်မ ကောင်းကောင်းနှိုင်းယှဉ်လို့ တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ၉ တန်းအောင်တဲ့အထိ မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းတက်ဖူးတာ ဘာ Project မှ မလုပ်ခဲ့ဖူး။ ဘယ်ကိုမှ Excursion မထွက်ခဲ့ဖူးလို့ အတန်းထဲမှာ သင်နေတဲ့စာနဲ့ ပြင်ပလောကမှာ ဘယ်လိုပတ်သက်တယ် ဆိုတာ မသိခဲ့တာ အမှန်ပဲ။ ဒီမှာတော့ ဘာပဲသင်သင် ပထမတန်းကစပြီး ကိုယ်သင်တာကို ကိုယ်လက်တွေ့လေ့လာရတယ်၊ လေ့လာဖို့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိတဲ့အရာဖြစ်နေရင် Excursion ထွက်ပြီး လေ့လာရတော့ ကလေးတွေလည်း သူတို့သင်ကြားရတာကို အကုန်လုံးသိတယ်။ Rainforest ကြောင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးအကြောင်းတွေ သင်ရင် မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းက ကလေးတွေ တောကို Excursion ထွက်ရသလို၊ Museum တို့ Art Gallery တို့ အကြောင်းသင်ရင်လည်း တောမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေ မြို့ပေါ်ကို Excursion လာရတယ်။ ၂ တန်းကျောင်းသားတွေမှာ မိမိအိမ်မှာ လူကြီးတွေ အမှိုက်ဘယ်လို ပစ်တယ်၊ အမှိုက်ပစ်တဲ့ စနစ်ကို အိမ်ကလူကြီးတွေ နားလည်မလည် သိအောင် အင်တာဗျူးအလုပ်ခံနေရပြီ။ ဒါကို သူတို့က ကျောင်းမှာ အစီရင်ခံစာ ပြန်တင်ရတာ၊ ၃ တန်း ၄ တန်းဆိုရင် မိမိပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာဖို့အတွက် Project တွေ လုပ်နေရပြီ။ အတန်းကြီးလာတာနဲ့ အမျှ စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်မှုက ပိုများလာတာပဲ။ ကျောင်းမှာ စာတခုတည်းမဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားရင် စိတ်ဝင်စားသလို ကလေးတွေအတွက် အားကစား၊ အနုပညာ အိမ်တွင်းမှု စတာတွေ အစီစဉ်လုပ်ထားပေးတာကလည်း ကလေးတွေအတွက် ပညာသင်ရတာ သိပ်ကို သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကိုယ်မရတော့ပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ကလေးတွေများ ဒီလိုရလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ဆိုတာအမြဲပဲ တွေးမိပါတယ်။
မကေ နဲ့ မငယ်နိုင်တို့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးထားတဲ့ ကွန်မန့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ။
vocational training က မြန်မာပြည်မှာပျောက်ဆုံးနေတာ တကယ့်နှမြောစရာပါ ။ ဒါပေမယ့် ပညာရေးစနစ်တခုလုံးက စနစ်တကျမရှိတော့ vocational training, university ဆိုတာတွေကြား ကွာခြားချက်တွေက distinct မဖြစ်တော့ပါဖူး ။ higher institution တွေထဲမှာ အနည်းဆုံး vocational training ပိုင်းကို စပြီး ပြန်ထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် university level ကိုလည်း ပြန်ပြုပြင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ အဲဒီ vocational training နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းကိုတောင် မကေရဲ့အမဆီက တောင်းထားသေးတယ် ။ မကေပြောတာနဲ့ အတူတူပဲ ထင်တယ် ။
နောက်တချက်က ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက်က ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီး သူ့အမေ (အထက်တန်းပြ physics & maths သင်တဲ့ ဆရာမ) ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါတယ် ။ သူ့အမေက ကျောင်းသားတွေကို ဒါသင် ဒါကျက် ဒါဖြေ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ ၊ တဆင့်စီမေးခွန်းတွေထုတ်ပြီး စဉ်းစားခိုင်းတာ (guided questioning လိုမျိုးပေါ့) လုပ်တော့ ကျောင်းသားတွေက မကြိုက်ကြဖူးတဲ့ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပညာရေးစနစ်က အမှတ်ကောင်းဖို့က အဓိကဖြစ်နေတော့ ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာ ကျောင်းသားတွေက အမှတ်ဘယ်လိုကောင်းအောင် ဖြေရမယ်ဆိုတာလောက်ပဲ သိချင်ကြတယ် ။ အဲလို ပြသနာက အမှတ်ကိုပဲအဓိကထားကြည့်တဲ့ ပညာရေးစနစ်တိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမှာတော့ ပိုများမယ်ထင်တယ် ။
နောက်တချက်ကတော့ ဆရာမတွေရဲ့လစာကလည်း နည်းလွန်းတော့ သူတို့က ဘယ်လောက်စေတနာရှိနေပါစေ နောက်ဆုံးတော့လည်း စားဝတ်နေရေးရုန်းကန်ဖို့ကို ဦးစားပေးရတာမျိုးတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။
အဲလို ပြသနာတွေကြားကနေ စာသင်ကြားရေးကို ဘယ်လိုဖောက်ထွက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့ ၀ိုင်းကြိုးစား စဉ်းစားကြည့်ကြရမယ် ထင်တယ် ။
Australia က ကျောင်းသားတွေပုံစံကို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာ အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ သင်ကြားရေးပိုင်းကို လုပ်လာကြပါပြီ ။ အထူးသဖြင့် မူလတန်းလိုအရွယ်တွေပေါ့ ။ လူဆိုတာကလည်း psychologically မြင်ရ ထိရ တွေ့ရ ကိုင်ရ ရင် ပိုစိတ်ဝင်စားတတ် ၊ ပိုနားလည်တတ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ ။ ဒါကြောင့် ခုဆို human behavior ကို လေ့လာပြီး ပညာရေးပိုင်းပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာတွေ ဆက်စပ်တဲ့အပိုင်းတွေကို သုတေသနပြုတဲ့ education psychology ဆိုတာမျိုး ရှိလာပါပြီ ။
Days ago, I was thinking about the education in Home Land, about Pyin Nyar (not knowledge) and how the country education system should be. Then i read this post. And i noticed that we are not going to the root of it. So I wanted to dig to the root and was thinking about it if i had free time. But as I am notascholar, notaspecialist in this area, it may be wrongly stated. :)
This isagood post and u should be happy that it boost me to think more :P.. great!